Ajụjụ - Inwu Star Electronic Technology Co., Ltd.
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere 7 ụbọchị. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 30-35 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ na akaụntụ, ị pụrụ ime ka T / T ugwo anyị akụ akaụntụ:
N95 Cup ekara ume , Niosh N95 Nri mkpuchi , N95 Ewepụghị n'ogige atụrụ nkebisi ume , N95 echebe ume , N95 cone Ọdịdị Na valvụ , N95 Rating Mask ,